Truths Inside The Bible: परमेश्वरको इच्छालाई कसरी जान्ने?
परमेश्वरको इच्छालाई कसरी जान्ने?
नोभेम्बर २६, २०१५
चाबि पद: १ पत्रुस ४:२; रोमी १२:२
परिचय: परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्ने भन्ने कुरा धेरै जसो ख्रीष्टियानहरूमा ज्यादै अलमल, कठीन र गलत बुझाई रहेको विषय हो। कुनै नयाँ काम गर्नमा, जीवन साथीको छनौटमा, सेवकार्यको निम्ति निर्णय गर्नमा इत्यादि परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्दछ। कुनै पनि कुरा जान्नको निम्ति ठीक तरिका र तोकिएको तरिका अपनाउनु पर्छ। एस.एल.सी को परिणाम जान्न ठीक तरिका र तोकिएको तरिका हुन्छ। तपाईंसँग ठीक नम्बर हुनुपर्यो, खोजी गर्ने ठीक माध्यम हुनुपर्यो अनि त्यस खोजी गर्ने माध्यममा ठीक प्रकृयालाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कतिको विचारमा परमेश्वरको इच्छा जान्न कठीन छ, परमेश्वरको इच्छा लुकिएको हुन्छ भन्ने हुन्छ। कतिको विचारमा परमेश्वरको इच्छा जान्ने तरिकाचाहिँ सपना वा दर्शन वा चिठ्ठा इत्यादि हुन्छन्। के साँच्चै परमेश्वरको इच्छा बुझ्नै नसकिने प्रकारको अनि लुकिएको छ त?
यहाँ यसै सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनबाट ठीक निष्कर्ष हेरिनेछ। हामी हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरका सबै इच्छाहरूलाई जान्न सक्छौं। परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने मुलतः चार तरिकाहरू छन्।
१. परमेश्वरको इच्छालाई पवित्र शास्त्रद्वारा जान्न सकिन्छ। २ राजा २३:३
भ.सं. ११९:२४ - पवित्र शास्त्र हाम्रो सल्लाहकार हो र यसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई स्पष्टसँग बुझाउने काम गर्दछ।
१ यूहन्ना २:१७ - पवित्र शास्त्रको सल्लाह यो छ, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि यसको भरपूर उपयोग गरियोस्। जति बढि यसको उपयोग गरिन्छ उति नै उहाँको इच्छालाई बुझ्निछ।
(तपाईंको दैनिकीमा बाइबल पढ्ने समय अटाएको छ वा छैन? दैनिक रूपमा बाइबल पढ्नाले मात्र परमेश्वरबाट सबै प्रकारका सल्लाहहरूलाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। बाइबल एउटा "म्यानुअल" जस्तै हो। नियमित बाइबल नपढ्ने व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छा उसको जीवनमा के छ भन्ने कुरा जान्न धेरै गार्हो हुन्छ किनभने ऊ मुल स्रोतबाट नै टाढा छ।)
न्यायकर्ताहरू १८:५-६, २०:१८ - परमेश्वरबाटको सल्लाह लिनाले हामीलाई सधैं असल परिणाम तर्फ नै लैजाँदछ।
लूका ७:३० – परमेश्वरबाट सल्लाह नलिनु भनेको आफ्नै विरूद्धमा जानु हो (लागि वा विरूद्ध अंग्रेजीमा against)।
२. परमेश्वरको इच्छालाई प्रार्थना र उपवासद्वारा जान्न सकिन्छ। दानिएल ९:३,४
प्रार्थना परमेश्वरसँग मार्गनिर्देशन र सल्लाह माग्ने एउटा तरिका हो। प्रार्थना परमेश्वरलाई सल्लाह दिनु होइन तर उहाँसँग सल्लाह माग्नु हो। तपाईं उहाँसँग सल्लाह लिन जानु हुन्न भने उहाँ पनि तपाईंलाई सल्लाह दिन बाध्य हुनुहुन्न। हरेक काम-कुरामा उहाँको सल्लाह अपरिहार्य छ; यसैले उहाँसँग प्रार्थनामा सहायता माग्ने व्यक्तिनै उहाँको निम्ति सल्लाह दिन हकदारको व्यक्ति हुँदछ।
लूका १८:१; रोमी १२:१२; एफेसी ६:१८; कलस्सी ४:२ - निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने सम्बन्धमा बाइबलले धेरै ठाउँमा जोड दिएको छ।
एस्तर ४:१६ - जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा यदि अझै धेरै अन्यौलहरू छन् भने उपवास एउटा अर्को असल उपाय हो। उपवासचाहिँ तपाईं प्रार्थनामा परमेश्वरसँग नजिक जाँदा अझ झुकेर कमजोर बन्दै जानु हो। जब जीवनमा कुनै उपाय निस्कँदैन तब उपवासले ज्यादै प्रभावकारी काम गर्दछ।
३. परमेश्वरको इच्छालाई पवित्र आत्मामा सुम्पिनाले जान्न सकिन्छ। १ थेस्सलोनिकी ४:३-४:८
पवित्र आत्माको नियंत्रणमा आफैलाई सुम्पनु ज्यादै महत्वपूर्ण छ। पवित्र आत्माको नियंत्रणमा नहुनु भनेको कसैको नियंत्रणद्वारा खतरामा हुनु हो। एउटा ख्रीष्टियानमा पवित्र आत्माको स्थाई वास हुन्छ जसको एउटा उद्देश्य भनेको उसलाई परमेश्वरको शिद्ध इच्छा तर्फ डोर्याउनु हो।
यूहन्ना १४:२६, १६:१३ - पवित्र आत्माले हामीलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। उहाँले सिकाउनुहुने सबै कुराहरू ख्रीष्टले भन्नुभएका कुराहरू नै हुन् जो हामी बाइबलभरि नै पाउँछौं। अनि उहाँले हामीलाई ति कुराहरूलाई सम्झना गराउनुहुन्छ।
एफेसी ४:३० - पवित्र आत्माको सल्लाह नलिनु भनेको उहाँलाई हाम्रो जीवनमा निष्कृय तुल्याउनु हो।
लूका ११:१३; एफेसी ५:१८ - हामीलाई आवश्यक सबै सल्लाहहरू दिनलाई पवित्र आत्मा सक्षम हुनुहुन्छ। हामीमा पवित्र आत्माको भरपूरीले ठीक निर्णय लिन र पाइला अगाडी सार्न सजिलो पार्दछ।
४. परमेश्वरको इच्छालाई सल्लाहहरूद्वारा जान्न सकिन्छ। हितोपदेश २४:६
हितोपदेश १०:१४, १४:३३ - सल्लाह लिँदा कस्तो व्यक्तिसँग लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरमा भक्तिको जीवन जिउने व्यक्तिबाटको सल्लाह सधैं परमेश्वरबाटको सल्लाह हुन्छ।
हितोपदेश १३:२० - बाइबलबाटका सल्लाहकारहरूसँगै रहनु असल हुन्छ।
१ कोरिन्थी १:२६; अय्यूब ३२:९ - तर कतिबाट होशियार पनि हुनुपर्छ।
हिब्रु १०:३६ - परमेश्वरको इच्छालाई जान्न धिरजको पनि खाँचो पर्छ।